Ukusetyenziswa komfanekiso kuMxholo kunye neempembelelo zawo kwiNtlalo, uPhando kunye ne-Ecommerce
NgoLwesine, uJuni 7, 2012 NgoLwesithathu, Juni 6, 2012 UJenn Lisak Golding
Rhoqo emva kweeveki ezimbalwa okanye ndibambisa umphathi wam ukuba agcwalise uhlahlo-lwabiwo mali lwesitokhwe. Akukho siqwenga somxholo esizisasazelayo okanye abaxhasi bethu abangenalo uhlobo lomfanekiso, umzobo, okanye umzobo owabelwe wona. Siyazi, ngokuqhubeka Martech Zone, xa sikhetha umfanekiso omkhulu ukufumana indawo yethu, iindwendwe ezininzi ziyafunda, zabelane ngakumbi, kwaye zinike izimvo ezingakumbi kumxholo. Abantu baxakekile kule mihla kwaye imifanekiso ifanelekile ngamagama aliwaka njengoko uphuhlisa umxholo wakho.
Imifanekiso yenza yonke into ibengcono. Kwaye yinto entle leyo, kuthathelwa ingqalelo ukuba zingaphi iinguqulelo ezinkulu kwimithombo yeendaba zentlalo ngoku ezibeka ugxininiso olukhulu ekusebenziseni iifoto ezikumgangatho ophezulu kumxholo. Ke kungakanani ukongeza imifanekiso kwimixholo yomxholo wakho? Mhlawumbi ngaphezulu kakhulu kunokuba ucinga.
Ngelixa siyazi ukuba iyinyani kwi Martech Zone, Kukho ubungqina bokuba imifanekiso sisitshixo sempumelelo xa ubhala kwaye usasaza umxholo kwiwebhu.
Konke malunga neMifanekiso by Intengiso ye-MDG
tags: UkuThengiswa kweMpahlaUkusetyenziswa komfanekisoimifanekisoinstagramyifotoukukhangela kwendawo
Yenza iwebhusayithi yasimahla, entle ngeMizuzu